Laftagareen oo Ciidanka xoogga kala hadlay dagaalka Al-Shabaab | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Laftagareen oo Ciidanka xoogga kala hadlay dagaalka Al-Shabaab
Laftagareen oo Ciidanka xoogga kala hadlay dagaalka Al-Shabaab
Madaxweynaha dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay dagaalka Shabaab ee gobalka Bakool la qaatey saraakiisha guutada sagaalad ee taliska qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed,iyadoo ay ka qeybgaleen taliyaha qeybta 60-aad iyo saraakiil kale.
Gaashaanle Muqtaar Maxmed Cabdulahi (Geesey) taliyaha guutada sagaalad ee ciidanka xoogga dalka oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegey in kulanka ay madaxweynaha la qaateen uu ahaa mid is xog wareysi ah.
Sidoo kale Muqtaar Geesey ayaa Sheegey in madaxweynaha KG. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta-gareen ay isla soo qaadeen sidii loo soo dhameystiri lahaa qorshayaasha horumarineed ee loogu talogalay dadka ku dhaqan deegaannada laga xoreeyay Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii waxaa uu umahad celiyay taliyuhu qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka bakool,isagoo xusay iney yihiin shacab dulqaad badan’ misana ciidamada kala shaqeeya sidii guud ahaan degaannada KG loogu soo dabbaali lahaa nabadgelyo waarta
Previous articleKhilaafka Shiinaha iyo Hindiya ee Dooxada Galwan xoogeystay
Next articleItoobiya Oo Eedeyn Culus U Jeedisay Masar Oo Khilaaf Kala Dhexeeyo